CAQIIDADA WAHHAABIYADU KITAABKA IYO SUNNADA ASAL MA KU LEEDAHAY?
Toddobaadkii ina soo dhaafay maqaal ayaan liiska SEJ soo gelshay, kaas oo aan uga hadlayay arrimaha caqiidada iyo xaaladda muslimiinta guud ahaan. Alle mahaddiis, aad baa akhristayaashu ula dhaceen maqaalkaas iyo macluumaadkii ku qornaa ee qiimaha badnaa, waxayna ii sheegeen qaar badan in ay aad uga faa'iidaysteen. Sikastaba arrinku ha ahaadee, laba akhristayaasha ka mid ah ayaa emaillo u soo diray liiska, waxayna kala ahaayeen BIIXI IYO CABDULLAAHI XAASHI, kolka bal aan laba eray ugu jawaabo inta aanan maqaalkayga u daadegin toddobaadkan.
Biixi wuxuu igu yiri: Fatwada iyo ka hadlidda Islaamka iyo Caqiidada, Xersiyow waa mid u taalla culumada ee adigu shaqo kuma lihid? Marka waxaan waydiinayaa Biixi, maxaad iigu diidaysaa culumanimada? Mise culumo waxaad ka waddaa kuwa wahhaabiyada iyo Itixaadka oo kaliya? Haddii aad kuwaas ka waddo waa runtaa anigu kuwaas kuma jiro, laakiin haddii aad aqoonyahan ka waddo anigu Alle mahaddiis, Ijaaso cilmiyaysan baan u haystaa in aan ka hadlo Islaamka siiba Caqiidada oo ah mowduuca aan ku takhasusay.
Cabdullaahi haddaan u soo laabto, waxaa warkiisii ugu muhiimsanaa weedha uu yiri (Waa la hubaa in caqiidada wahhaabiyada iyo Itixaadku sax tahay)!!. Cajiib, bal yaa u shegay oo uu ka baawsaday Cabdullaahi warkan, illeen asigu Caqiido wax kama yaqaane? Haddii aad walaalow qof ka maqashay warkaas waa uu ku lunshay qofkaas ee aniga iga dhegayso.
Caqiidada Itixaadka iyo Wahhaabiyada:
Wahhaabiyada ama Ittixaadka Soomaalida ama Ansaarusunnaha Masar iyo Suudaan ama Selefiga Suuriya iyo Jordan iyo Khaliijka iyo Hindiya iyo Pakistan dhammaan waa isku mad-hab, waxayna ka farcameen Wahhaabiyada. Caqiidadooduna waa caqiido ay ka soo qaateen Kirishtaanka oo aanan Islaamka sal ku lahayn, waxayna tahay sidan:
1. Towxiid al-Uluuhiyah oo ah waxa kirishtaanku ku magacaabaan (Ruuxul-qudus).
2. Towxiid al-Rubuubiyah oo ah waxa ay kirishtaanku ku magacaabaan (Rabbi ama Lord).
3. Towxiid al-Asmaa wassifaat oo ah waxa ay kirishtaanku ku magacaabaan (Ibn ama Son).
Caqiidadan fasahaadsan waxaa keenay Ibn Taymiyah markii ugu horreysay, bal ninka leh waa la hubaa in ay sax tahay, waxaan waydiinayaa, xagee looga sheegay quraanka iyo sunnada ma iga tusi kartaan?
Kolka aad su'aashaas waydiiso waxay ku wareegaalaysanayaan aayado aanay kasayn macnahooda iyo waxa looga jeedo!! iyo Axaadiis badan oo aanan wax xiriir ah la lahayn mowduuca laga hadlayo!!
Derejada Caqiidada wahhaabiyada:
Haddaba, ogow walaal, in caqiidada wahhaabiyadu ku derejo tahay, caqiidada: Qaadiyaaniyada iyo Duruusta iyo Ismaaciiliyada iwm. Waana kooxo la ogyahay in ay Islaamka waahore ka go'een, laakiin wahhaabiyadu waxay ka soo baxday Sacuudiga taas ayaana keentay in ay islaamka ku dhegganaato muddo dheer oo sharteedu fuqi waydo.
Haddaba sidee looga hortagaa wahhaabiyada iwm?
Ittixaadka iyo Wahhaabiyada iyo kooxaha la midka ah waxay aad u saameeyeen muslimiin badan oo caamo ah, nin caalim ah oo aaminsan arki maysid, sidaa darteed waddamada muslimiinta ah ee dadkoodu waxbartay waa laga xaaraantinimeeyay caqiidadaas, sida Malaysia iyo Jordan iyo Suriya iyo Indonisia iyo Masar iwm, qofkii lagu arko waa dambi maxkamad lagugu gaynayo.
Laakiin waxay ku hartay waddamada dadwaynahoodu (Caamadu) ay jahli wali ku jiraan, sida carabaha qaar iyo Hindiga iyo Soomaaliya iwm, taas waxaa ka daran in soomaalidii u haajirtay dalalka Yurub iyo America iyo Australia ay caqiidadaas fasahaadsan qaateen oo ay wali ku mintidayaan, siiba kuwii ayaga oo waawayn ka yimid soomaaliya ee aanan nasiibka u helin in ay iskuullo galaan. Laakiin dadka yaryar ee ku dhashay dibadda ama ayaga oo yaryar soomaaliya ka yimid ee dibadda wax ku bartay, caqiidadaas fasahaadsan way ka nabadgaleen.
Dadka ayaga oo waawayn ka yimid Soomaaliya:
Haddaba, waxaa hadda dhib ka taaganyahay, kooxaha ayaga oo waawayn ka yimid soomaaliya ee aanan nasiibka u helin in ay tacliin toosan helaan, kooxahaas oo caqiidada wahhaabiyadu madaxa ka qabsatay waxaa lagudboon in ay raacaan qodobada soo socda si ay uga badbaadaan dhibaatada ciqiidadaas.
1. In ay akhristaan quraanka oo tafsiirka ka dhegaystaan qof aanan Wahhaabi ahayn.
2. In ay muslimiinta la tukadaan oo ay ku tukadaan masaajidka ay muslimiintu isugu tegayso, oo aanay ku tukan masaajid u gaar ah wahhaabiyada ama masaajid wahhaabiyadu xukunto ama sacuudigu leeyahay ama meelaha Itixaadku ku dukanayo ee bannaanada ah. Ama masjid imaamkiisa sacuudigu mushaar siiyo, dhammaan meelahaas salaadi ku ansixi mayso, kolka dadka caamada ah waa in ay arinkaas la socdaan kana feejignaadaan.
3. In ay akhristaan culuunta guud, macnaha ay (Thaqaafada guud) kororsadaan oo dhaqamada iyo diimaha iyo bulshooyinkale in ay jiraan ogaadaan, joornaallada iyo buugta yaryar ayaa culuuntaas fudud laga helayaa.
4. In ay bartaan madaahibta muslimiinta iyo taariikhda Islaamka iwm ee kordhinaya aqoontooda xagga Islaamka. Waxaa laga helayaa, internetka ama buugta yaryar qaarkood ama duruusta ay culumada qaar jeedshaan ama joornaallada Islaamiga ah.
Qodobadaas waxay kaa caawinayaan in aadan ku hodmin waxyaabaha ay la wareegayaan wahhaabiyadu ama Itixaadku.
Sidee baa wahhaabi loo soo hanuunshaa?
Haddii aad leedahay saaxiib Wahhaabi ah ama Ittixaad ah, waxaa kula gudboon in aad caawisid oo aad soo hanuunisid dariiqa toosanna tustid, adiga oo kaashanaya qodobadan:
1. In aad u sheegtid in waxani firqo yihiin oo ay la mid yihiin firqooyinka lunsan sida Qaadiyaaniyada, iyo Ismaaciiliyada iyo Duruusta iwm, oo uu aasaasay Ibn Cabdilwahhaab, Nabi Muxamad iyo Ilaahayna aanay soo dejin, haddii uusan kaa rumaysan, waxaad ku dhahdaa iga tusi kitaabka ama Sunnada meel ay ku qoranyihiin waxa ay caqiidadiinnu ku salaysantahay ee ah saddexda qodob ee aan soo sheegay (Towxiidka Uluuhiyada, Rubuubiyada iyo Magacyada ama sifooyinka).
2. U sheeg in Caqiidadani waddamada qaar xaaraan ka tahay oo aanan la ogolayn oo qofkii lagu arko la xirayo sida Malaysia, Jordan, Suuriya, Masar iwm.
3. U sheeg in Caqiidadani ka timid Kirishtaanka, oo uu soo allifay nin la dhihi jiray Ibn Taymiya oo ku dhashay magaalo la dhihi Jiray (Xarraan) oo kirishtaanku degganaa, dabadeedna ay ku soo anqarsheen intii uu yaraa, kolkii uu Suuriya tegay ayuu xasuustay oo la soo baxay wixii ay nasaaradu ku soo bareen (Xarraan) ee xaaraanta ahaa.
4. U sheeg sida ay caqiidada Itixaadku u waafaqsantahay caqiidada Kirishtaanka ee seddaxlayda ah iyo in aanay islaamka ku jirin caqiido seddaxley ah oo noocaas ah.
5. Usheeg in firqadan wahhaabiyada ay firqo kaafir ah tahay oo diinta ka baxday, maxaayeelay, muslimiinta oo dhan bay kufriyeen intaan ayaga ahayn, sida la ogyahayna muslimiinta oo dhan kufri ku kulmi mayaan sida xaddiiska Nabigu sheegay nnk caddeeyay, sidaa darteed, waxaa kufaar ah wahhaabiyada ee Muslimiintu kuffaar maaha.
6. Waxaad u sheegtaa in kooxdani caabudaan Ibn Taymiya iyo Ibn Cabdulwahhaab, Ilaahooduna uu yahay sanam cirka meesha kacbada ku aaddan kursi wayn kula fadhiya, sida ay kutubtooda ku caddeeyeen.
7. Waxaad u sheegtaa in kooxdani ay Nabigeennii Muxamad ahaa nnk ku magacaabaan "boostaale" sida ibn Cabdilwahhaab yiri, oo aanay wax ixtiraam ah u hayn, culumada intooda kalena warkoodaba daa.
8. Usheeg in kooxdan ay markii hore isku magacawday "muwaxidiin", kadibna "ikhwaan", kadibna "salafiyiin", kadibna "ahlusunnah", kadibna ay u kala jabeen laba kooxood, koox dowladda sacuudiga taageersan oo isu bixisay "alfirqa an-naajiyah" iyo koox ka soo horjeedda oo loo yaqaan "al-qaacidah". Taas ayaa caddaynaysa kooxdan in ay lunsantahay, haddii ay toosanyihiin maxay maalinwalba magac ula baxayaan, maxaysa ugu darooryaamayaan "waxaan haysanaa dariiqii salafka", muslimiinta oo dhan arki maysid qof dhahaya "waxaan gelayaa jannada oo aniga ayaa kaligay badbaadaya" wahhaabiyada uun baa sheegatay in ay kaligood jannada geli doonaan oo isku magacaabay "al-firqah al-naajiyah" muslimiinta inta kalena kuffaar ku magacaabay.
Haddii uu qof caqli leh yahay, oo uu intaas maqlo, kolley wuu garawsanayaa, waana fahmayaa in aanay isu ekayn Islaamka iyo Kirishtaanku, waxaana rejaynayaa in uu soo hanuuno oo dariiqa toosan soo qaado.
Kolka uu soo hanuuno, kitaabka iyo xadiiska ha akhristo, asiga oo aanan raacin tafsiirkii wahhaabiga ahaa ee lunsanaa, ee ha raaco kutubta waawayn ee culumadii taabiciinta iyo taabicitaabiciintu qoreen, iyo kuwa ay qoreen culumada maanta ee al-Azhar ama reer Shaam iwm ah, hana ka fogaado culumada Sacuudiga ee wahhaabiyada ah.
Intaas ayaan uga baxaynaa maanta dersigeenna, waana inoo toddobaadka dambe haddii alle yiraahdo.